Indiana: Yakayerwa Kushambadzira Mari Yenyika | Martech Zone
Indiana: Yakayerwa Kushambadzira Capital yePasi
Chipiri, Gunyana 21, 2010 Svondo, Kukadzi 9, 2014 Douglas Karr
TechPoint iri kuzivisa zviri pamutemo Indiana Inoyerwa Kushambadzira Initiative, mushandirapamwe wenyika yehukama hwehukama hwekumisikidza Indiana semutungamiri webhizimusi rinokurumidza kukura, tekinoroji bhizinesi rakagadzirwa neTechPoint kuyerwa kushambadzira.
Izvo Zvinoyerwa Zvekushambadzira Initiative Zvinangwa:
Simudza ruzivo rwekuti dunhu iri riri kuvandudza mamwe emhando yepamusoro yezvigadzirwa nemasangano ekushandira munyika kana zvasvika kune mhedzisiro-based kushambadzira kwekuedza uye matekinoroji.
Gadzira vatengi vemabhizinesi aripo kuburikidza nekusimudzira kwenyika. Izvi, zvakare, zvichatibatsira kuramba tichitsvaga vane tarenda vakapedza kudzidza kubva kuzvikoro zveIndiana uye nekuenderera mberi nekukudziridza mikana nemabhizinesi mikana.
Kukwezva makambani kuti aumbe mabasa uye mari muIndiana. Indiana inogara ichizivikanwa seimwe yedzinodhura nyika dzevadzidzi vekoreji. Nyika yedu iri mune yakakura mari chimiro uye yedu yakaderera mutengo wehupenyu unoita kutanga mabhizinesi zvakanyanya kudhura - kupa zvirinani mikana yekubudirira uye kukura.
Pamwe naChris Baggott, ndinodada kuve ndakange ndiri chikamu cheichi chiitiko kubva kumatangiro ekutanga. Ndinorumbidza Jim Jay nezvikwata zviri paTechpoint neBall State. Vakaita basa rinoshamisa mukusimudzira nekusunda chirongwa ichi.
Indiana Inoyerwa Kushambadzira Initiative
Chii chinoyerwa kushambadzira? Kuyerwa Kushambadzira itekinoroji bhizinesi microcluster yakanangana nekugadzira maturusi uye mazano emabhizinesi ekushandisa data kusimudzira kana kugadzirisa kwavo kushambadzira kuedza kune vese vatengi nemabhizinesi.
Chii chinonzi chiyero chekushambadzira kambani? Akayera makambani ekutengesa anopa chikuva kana sevhisi yekushambadzira kwedhijitari kuburikidza neemail, zvemagariro midhiya, kutsvaga, vhidhiyo, nhare uye humwe hunyanzvi hunowedzera matekinoroji, uye ivo vanopa vatengi kudzoreredza-on-kudyara yekutevera. DK New Media inodada kuve kambani iri pakati peiyi inochinja microcluster.
Nei Indiana iri mutambi mukuru muindasitiri yakayerwa yekutengesa? Kupfuurisa 70 akayera makambani ekutengesa fonera nyika yeIndiana kumba, uye zvichibva pane iripo data, chikamu muIndiana chakura 48% kupfuura irwo rwese rwenyika.
Saka - kana iwe uri mudzidzi wepakoreji, bhizinesi rinoshuvira kutora chikamu, bhizinesi rekushambadzira bhizinesi rinotarisa kutamira kune mikana iri nani, kana kambani yemabhizimusi yemari inotarisira kuisa mari…. chengetedza maziso ako kuti afukidze kumwe kufukidzwa kwenyika kuIndiana Measured Marketing Initiative!
Tags: Wedzeraamazon sesfacebook kushambadzirafacebook appskwakajeka pataniyakaderera mutengotwitter kushambadzira kushambadzamamiriro ekunze anotarisa